အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အမြောက်အများသည် VET ကိုအလွန်ကြောက်ကြသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သော phobias ။ ခွေးများတွင်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးရန်သွားသည့်အခါကိုက်ခြင်း၊ ဟောင်ခြင်း၊
သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ vet အားကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အကြောင်းများစွာပေါ်မူတည်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာတိရစ္ဆာန်၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။
1 အဘယ်ကြောင့် VET ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်း?
2 Vet ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အကြံပေးချက်များ
3 VET သို့မောင်းပါ
အဘယ်ကြောင့် VET ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်း?
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းတွင်သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုဆီးသွားစေနိုင်သည့်ဆိုးကျိုးကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အဘယ်မှလာသနည်း။ အခြေခံသဘောအရ, ဒါကကျန်းမာရေးပြisနာဆိုတာသူတို့နားမလည်ကြဘူး။ သူတို့ဟာအဲဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲမြင်ကြတာပေါ့။ သူတို့ကဘယ်သူတွေကိုတို့ထိတယ်ဆိုတာမသိတဲ့အပြင်အခြားထူးဆန်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းပါပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဆေးခန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည်ပိုမိုတိုတောင်းပြီးမကြာခဏဖြစ်သင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ယင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ဆိုးရွားမည်မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နဲ့ဆေးခန်းကိုသွားပြီးမင်္ဂလာပါလို့ ၀ င်လာရင်ဒါကထုံးတမ်းစဉ်လာကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။
ခွေးတစ်ကောင်ကို VT လေ့ကျင့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကသူဟာခွေးကလေးဖြစ်တုန်းကပါ။ ခွေးပေါက်စများသည်ဆေးခန်းကိုသွားပြီးတိုင်ပင်မှသာသွားရတော့သည် ပုံမှန်။
သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူဆေးခန်းထဲသို့ဝင်နေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အားရစရာတစ်ခုအတွင်းပိုင်းကိုလက်ခံရရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ဆေးခန်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်အခိုက်အတန့်နှင့်ပေါင်းသင်းပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို VET သို့ကားဖြင့်ခေါ်သွားပါကသူသည်ကားကိုမကြိုက်ပါကအတွေ့အကြုံသည် ပို၍ ဆိုးကျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် သင်၏ခရီးကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ကားနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒါကိုရှောင်ရှားဖို့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ခွေး / VIX ကိုသိခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် vet ကိုကြောက်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
2017 ကျဆုံးခြင်း: အင်္ကျီနှင့်အကျီများအတွက်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ